छबि पुत्र साकारले मंगलम् हेरे पछि जे भने छबि नै अचम्मित !! | kollywood Update
छबि पुत्र साकारले मंगलम् हेरे पछि जे भने छबि नै अचम्मित !!
माघ ३ , कलिउड अपडेट ।
निरन्तर चलचित्र निर्माणमा लागिरहने निर्माता छबिराज ओझाको पछिल्लो चलचित्र हो मंगलम् । छबिराज प्रोडक्सनबाट निर्माण हुने चलचित्रलाइ छबिका छोरा साकार ओझा प्रत्यक्ष सहयोग गरे पनि कहिल्यै पिताको निर्माण हुने फिल्म बाट सन्तुष्ट भएनन् । ड्याडले आफ्नो जेनेरेशनको फिल्म निर्माण नगर्ने भन्दै साकार ले बिगतका चलचित्रलाइ कहिल्यै प्रचारप्रसारमा सहयोग गरेनन् तर पछिल्लो चलचित्र मंगलम् ल्यावमा जव उनले हेरे , अनि छबिको अगाडि जे भने छबि राज ओझा अचम्ममा परे ।
आफूले बनाएको फिल्मलाइ कहिल्यै तारिफ नगर्ने छोराले आफूले हेरेका नेपाली फिल्म मध्ये सबै भन्दा राम्रो र उत्कृष्ट फिल्म भने पछि छबिराज ओझाको खुसिको सिमा रहेन । साकार ले अाफूलाइ नेपाली फिल्म मध्ये सवै भन्दा मन परेको फिल्म नै मंगलम् रहेको बताए । यस अघिका सिनेमामा कहिल्यै सन्तुष्टि नभएको साकार बताउछन् ।
चलचित्रका निर्देशक नवल नेपाल पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका दर्शकलाइ मंगलम्ले फिल्म अवधिभर बाँधेर राख्ने दाबि गरे । शिल्पा पोखरेलको प्रस्तती चलचित्र मंगलम्मा निर शाह , मिथिला शर्मा , पुष्प खड्का , शिल्पा पोखरेल , पृथ्वीराज प्रसाइ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । चलचित्र फागुन २५ बाट प्रर्दशन हुदैछ ।